Debian 8.0 "Jessie" inotakura neLinux 3.16 kernel | Kubva kuLinux
Debian 8.0 "Jessie" ichaendesa neLinux 3.16 kernel
Panguva ino buzz uye kusashivirira kwevashandisi veiyi distro (mukuwedzera kune yapfuura kuburitswa kwe Ubuntu 14.04 "Trusty Tahr"), Chikwata che Debian akaita nharo kuti ndeipi kernel vhezheni Linux inofanirwa kushandiswa kune anotsiva yazvino vhezheni Debian 7 Wheezy (iyo yekupedzisira Chikunguru 12 yakatanga iyo yayo gadzirisa 7.6, ino nguva ichitarisa pane zvinoshandiswa ne server).
Ndeipi vhezheni yekernel ichave naDebian Jessie?
Sarudzo yekupedzisira yaive iyo Debian 8.0 Jessie inosanganisira kernel nekutadza Linux 3.16, uye chikonzero chikuru nei iyi vhezheni yakasarudzwa inyaya yekuti ichaburitswa mumwedzi waNyamavhuvhu. Uyezve, iyo yekuyedza backport ye Debian iyo Kusunungura Musarudzo edhisheni ye debian jessie kana paine chero munhu anoda kuzviedza. Mune chiziviso chakapihwa kuburikidza nebhurogu Bits Kubva kuDebian, zvinoonekwa zvakare kuti mapakeji asingawirirane nekernel anofanirwa kubviswa munzvimbo yekuchengetera risati rasvika zuva rekugwamba, rinova Mbudzi 5, 2014.
Kune avo vakatoisa debian jessie, iyo parizvino iri muchikamu chekuyedza, iyo kernel inofanirwa kuvandudzwa kuburikidza ne:
kutsiva yazvino kernel vhezheni (3.14).
Sezvo rumwe ruzivo, zvinotaurwa kuti iyo kernel ichachengetedzwa ne Ubuntu Kernel Chikwata kusvika munaApril 2016 nekuti haisi vhezheni iri yebazi reLTS, sekureva kwa kernel.org.
Kuti uwane rumwe ruzivo nezve izvi, ini ndinokukoka kuti tinya pa Iyi link.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Noticias » Debian 8.0 "Jessie" ichaendesa neLinux 3.16 kernel
Zvakanaka, ini handizive zvekutaura .. Ini ndinofunga haisi zano rakanaka kuisa isiri-LTS kernel mune yakagadzikana distro iyo zvakare inotsigirwa nevakomana veUbuntu (pasina chinangwa chekukanganisa maUbunteros) :( .
Iyo LTS haina kupihwa mushure mekuburitswa zviri pamutemo? Mavhesi 3.10, 3.12 uye 3.14 maLTS, ndinovimba izvi ndizvo zvakare. Uye kana ikasapedzisira yave LTS, pamwe Debian anofanirwa kufunga nezvekuchinja, sekugwamba kwaJessie handifunge kuti ipfupi ...
PS: Iye zvino zvawadzokera kuSlackware, isu takamirira iwe, peter, 🙂.
Kazhinji, zvinozivikanwa kusati kwasunungurwa kuti kernel ichengetwe kwenguva yakareba here Ndosaka vakomana veDebian vatoziva kuti vhezheni 3.16 haizove LTS. Zviri kuziva kuti ivo vanosarudza iyi kernel kubvira muna Gumiguru wegore rino kutsigirwa kweiyo 3.4 LTS kernel inopera uye kubva pane zvandinoziva iyo LTS nyowani ichauya neiyo 3.18 kernel chaizvo muna Gumiguru :).
Nezve izvo zvidzidzo, ini ndakatoita imwe nezveSlackware mwedzi mitatu yadarika: https://blog.desdelinux.net/despues-instalar-slackware/
Kuiongorora zvishoma, inguva yechinyakare maererano nevlc, libreoffice uye oracle jdk .. Hapana chisingagadzirise kutarisa kune slackbuilds.org ye libreoffice uye jdk uye ye vlc yakakwana kurodha pasi nekuisa iyo npapi-vlc. uye vlc mapakeji eiyo peji:
Mamwe maLTS ndinofunga anoziviswa mushure mekuburitswa kwavo ipapo. Iyo 3.12 yaisazove uye ndinofunga yakaziviswa apo iyo 3.13 yakanga yatobuda kare. Zvisinei, kana 3.18 ichave LTS uye iri muna Gumiguru, ini handinzwisise kuti sei vasingaise iyo, kunze kwekunge Jessie aine chando chipfupi (icho chandinodzokorora, zvinoita sekunge nguva dzechando dzichakura uye dzekupedzisira yaive inopfuura mwedzi misere).
Uye ini ndinotenda iyo dzidziso, asi kune zvinhu izvo zvakaoma kutevera muSlackware. Semuenzaniso, kuwanda kwemaumbirwo ekumisikidza 32-bit zvirongwa: zvinoonekwa pawiki ndeye hellish maitiro, ine mhando yekupedzisira script yekumhanyisa pese paunoda kuisa chimwe chinhu mu32-bit, chakandiomesera. Kana maitiro ekugadzira yakachena, pasina mapakeji asina basa, semuenzaniso rutsigiro rwezvigadzirwa zveHP (iyo semuenzaniso inogona kuiwana, asi kune zvimwe zvinhu zvisina basa izvo zvaisingaite, sematafura ese ainoisa nekumira). Iwo mawebhusaiti ane mashoma ekuisa zvinyorwa muSlackware anobva kune apfuura vhezheni, ini handina kuona chero yeiyo 14.1. Ini handisi rookie, asi rudzi urwu rwechinhu runondipa ruremekedzo rukuru ...
Zvakanaka, muSlackware installer inokupa mukana wekuita sarudzo yemapakeji A, AP, D, F, K, L, N uye X. Unogona kuita izvi nekusarudza panzvimbo peiyo "izere" sarudzo iyo "menyu" sarudzo ». Kune izvi iwe unofanirwa kuwedzera iyo KDE uye KDEI boka kana iwe uchida kuve ne KDE senge nharaunda kana iro XAP boka kana iwe uchida kuve neXFCE kana imwe imwe. Boka remutambo (Y) ini handifuratire .Mamwe mapoka aya paanosarudzwa, iwe unosarudza pasuru nepakeji mukati memapoka Semutemo, siya mapakeji ese emapoka A, AP, D, F, K, L, N uye X akanangidzirwa.Fungisisa pazvikwata zve KDE, KDEI kana XAP uye pano unofanirwa kusarudza iyo yaunoda kuisa kana kuti isati yatove iyoyo. kune mitambo yakawanda kana zvishandiso zvaunoita kana zvausingade uye zvinoenderana neumwe neumwe :).
Kana iri multilib muna 64 bit Slackware zviri nyore.Ingovhura iyo terminal, pinda mukati semudzi uye nyora izvi:
lftp -c 'kuvhura http://slackware.com/~alien/multilib/ ; girazi 14.1 "
kukwidziridzwa kg -reinstall - kuisa-nyowani * .t? z
kukwidziridzwa kg-kuisa-nyowani slackware64-compat32 / * - compat32 / *. t? z
Uye ikozvino ndiani multilib 😀
Zvakanaka, 32-bit kuenderana kwakakosha kwazvo, muSlackware wiki maitiro acho akareba. Kutenda neruzivo!
Zvinoenderana nemaonero, avakandipa, chokwadi chekusarudzwa naDebian chingave chikonzero chakaringana kuti vachinje ive LTS
Iyo 3.14 kernel yaitadza neangu Intel iris pro 5200 uye iyo i7 4750HQ processor. Shandisa openSuSE 13.1. Ndakamira kushandisa iyo yakagumburwa kernel, kune avo vasingazive nzira yekuita iyo nyowani kernel yakagadzika mu openSUSE. Ini ndaishandisa iyo yakakoromoka kernel sezvo ini ndanga ndavhuraSUSE 12.3. Kernels 3.11, 3.13 aenda zvinobudirira.
Semuenzaniso, maprosesa ari pasi pechinyakare mamiriro ari pakati pe0 - 5% (izvozvi nechrome yakavhurika uye makumi maviri tabo 1%), uye neiyo kernel ivo vanoiswa kune 20 - 1% vasina chavanoita. Zvakaipisisa pane zvese, kunyora faira kwaisavimbika. (iine 5 futi).
Ini ndaneta nekuyedza mhodzi nyowani, pamwe ikozvino vahuvandudza, asi chokwadi kuti Intel inotsigira kernel, zvirinani, haina chokwadi kana vachizviita nemazvo. Ndakatenga komputa ine Intel mifananidzo (uye ine simba) yeiyo dzidziso yakanaka rutsigiro.
Ini ndinongovimba kuti kugoverwa kunoedza tsanga dzavo pamakomputa senge yangu (clevo 740su), nekuti ini ndinonzwa kuti kuve nemifananidzo ine vashoma kwazvo, ini ndakamisikidzwa.
Pindura kuna orbayo
Debian kernel yakachengetedzwa neUbuntu Kernel Team? Iri jee, handiti?
Zvinhu zviri muDebian zvinowedzera uye zvinonakidza, SystemD, isiri-LTS kernel, nonsensical hurukuro pane yeDebian runyorwa, zvakadaro.
Nguva dzose hurukuro, uye kunyangwe ichiri Debian, ini handinetseke nezvako.
Naaahh handina kana hanya nazvo, Debian acharamba ari Debian chero DFSG ichiremekedzwa. Kutaurisa kwangu kwainangidzirwa zvakanyanya kupokana kwakagadzirwa nguva pfupi yadarika mu distro (iyo neimwe nzira yandinoona nenzira yakanaka, sezvo vazhinji vachitenda kuti Debian afa), kunyanya panhau yeSystemD uye ikozvino kernel kwete LTS , inochengetedzwa neBuntu Kernel Team.
Zvisinei, Debian anogara ari distro wandinoda, asi parizvino ndiri kunyora Gentoo yangu nyowani, ndichaona kana Gentoo achindibata kana kuti ndinodzokera kunzvimbo dzerunyararo rweDebian.
PD: Parizvino ndichishandisa PC yemurume wangu wekare, kune avo vanotsika neUA.
Usanetseke nezve maU troll, iwo mashoma. Chinondishamisa ndechekuti chiziviso chiri paDebian blog chaive netroli toni (iyo yagara ichisimbiswa nezvakataurwa naMark Shuttleworth 😛).
Nezvekukakavadzana kwaDebian, ndinofunga zvakanaka, nekuti vangadai vasina kuzonamirwa uye vanenge vachitevera nzira imwechete seUbuntu LTS kana Slackware, iyo inoshandura vhezheni nekukurumidza kana epiki ikakundikana senge Heartbleed kubva kuOpenSSL inomuka, pamusoro pekuwedzera otomatiki pane kukwidziridzwa zvakanyanya pasina kuparadza zvakapfuura masisitimu (rukudzo rwangu kuna Debian)
Zvakanaka, sezvo iwe urikutaura nezveGentoo, urikuisa Yuno Gasai senge kumashure kweGRUB 😀?
Mhoro shamwari @ eliotime3000, usagumbuke, asi timu yeSlackware inoshandisa zvachose vanilla kernel nepo Ubuntu inoshandisa kernel yakagadziridzwa navo .. MuSlackware zvese zviri vanilla (tenda kunaka 😀). Ichi ndicho chikonzero ini ndinofungidzira zvakanyanya nezvekuchengetedzwa kunopihwa naUbuntu. Ini ndinofanira zvakare kutaura kuti muDebian ini handina kumbobvira ndarohwa nenjodzi kana kernel kuvhunduka nepo muUbuntu kanopfuura kamwe chete :). Kunze kweyekuti kanopfuura kamwechete ndakaona iyo sisitimu yese ichityora nyangwe Ubuntu LTS nekuda kwekuvandudzwa .. Izvo muDebian kusvika zvino hazviitike .. Ini ndinofunga kuti timu yeDebian inofanira kudzora zviitiko zveUbuntu muDebian .. Isu tatoona musiyano wakashata muhunhu uripo pakati paDebian Squeeze na Wheezy nekuda kwenzvimbo yeboka reUbuntu muDebian.Ndine chokwadi chekuti chinangwa cheiyo Ubuntu timu ndechekuparadza Debian sezvo yatove kukwanisa kuchengetedza distro yayo isina kuenderera kuve kwakavakirwa paDebian uye Ubuntu mapakeji kazhinji haawirirana neDebian.
Kwazisai uye ndokumbirawo, pfungwa iyi inoparadzirwa pasina chinangwa chekutsika: D.
Iyo kernel inochengetwa neUbuntu iri isinganzwisisike uye chokwadi hachisi chinosekesa, kunyanya kana Ubuntu ikaisa maoko avo paDebian kernel.
Uye hongu @ eliotime3000 ini ndichaisa yangu inonamatwa uye psychopath Yuno yakazara senge kumashure kweGRUB yangu
Ini handina basa nezvawataura, @petercheco. Zvinoshamisa Debian inoshandisa vhezheni yeLinux kernel mairi inowanzo fanika se linux-yakasununguka (ndosaka mablobs akaiswa zvakasiyana zvichienderana neproprietary firmware), saka Ubuntu inofanirwa kuvimba nekuburitswa kweDebian kuti ienderane nezvido zvayo (chikonzero chikuru chekernel-panics), kunyangwe kuziviswa kwaDebian kunoshandisa Ubuntu kernel ingangoita asi kwete chisimbiso.
Uye sekunge izvo zvaive zvisina kukwana, Ubuntu aifanirwa kushandisa iyo linux-libre kernel kana ichida kuchengeta iyo distro iyo yakaidyisa kubvira 2004, pamusoro peizvozvo, nesarudzo iyi yaisazokanganisa kugadzikana kwaDebian, kubvira ingadai iri kushandisa kernel yakachengetedzwa ine garandi yeiyo FSF yekusave nehonye dzinokanganisa kernel kuvhunduka.
Parizvino, iwo mikana inopihwa pane iyo blog.
Dai ikaburitswa mu "nhau" kana "zviziviso" chikamu cheiyo webhusaiti yepamutemo, saka zvaisazogadziriswa. Kunyanya, yaive fungidziro yekuti yaisafanirwa kunge yakabuda mumadziro mana echikwata cheDebian, sezvo isina kuburitswa pane yekutumira tsamba.
Parizvino ndiri kunakidzwa naDebian Jessie mushure mekurwa naye. QTCurve mu KDE 4.8 padhuze nekernel 3.14 (nekuda kweshure back, hongu) muDebian Wheezy, uye chinonyanya kushamisa ndechekuti muJessie, unogona kuona kuti kune chaiko optimization yeiyi vhezheni yekernel.
Zvakadaro, Debian Jessie andisiya neine kuravira kuri nani mumuromo mangu nekusimba kwaro kupokana neSystemD uye XFCE senge iri default desktop nharaunda (GNOME inosarudzika zvichienderana nenguva yekutanga uye yekupedzisira nguva yandakaedza iyo Debian Jessie simaki), uyezve izvozvi ivo varikuenda, mushure meinertia yekuvandudzwa muSqueeze uye kuenderera kwe Wheezy nebazi reESR reIceweasel, ikozvino zvinoita sekunge mune inotevera vhezheni, pakupedzisira iro rekuburitsa bazi richadzoka (kunyange harienderane nerekumashure kubva kuDebian Mozilla, ingangoitika).
Imwe fungidziro yakaitwa neiyi Debian blog posvo yave iri, kekutanga, Debian angave ari kuteedzera modus operandi yekuvandudzwa kune maLTS edhisheni eUbuntu.
Zvakadaro, ino inguva yekutanga kubatika mubazi rekuyedza raDebian, uye ini ndinogona kutaura, rakadzikama kupfuura Ubuntu. Ngatione kana panguva yekutonhora bazi, ivo pakupedzisira vanokwanisa kuisa iyo Software Center seya Wheezy uye Squeeze.
Yangu kernel haina kuongororwa uye ini ndiri paJessie.
[…] Iyo yekuyedza Debian backport Regedza Musarudzo edhisheni izvozvi zvagadzirira Debian Jessie kuitira kana paine munhu anoda kuzviedza. […]
Charles chena akadaro
Isiri-LTS kernel yakachengetedzwa neUbuntu vanhu? zvirokwazvo chisarudzo "chisingatarisirwi"
Pindura kuna Charles White
Uku kufungidzira kubva kuchikwata cheDebian. Kunyanya, kana kernel ikabuda mushanduro yeLTS, vaizozvisimbisa muchikamu chenhau chesaiti.
Handifunge kuti ichaomesera vhezheni yandinoenderera nayo mukuyedza ibazi rakagadzikana kunyangwe riine zita
Ndinotenda matambudziko andaive nawo
saka handinetseke zvakanyanya
ini ndakangoodzwa moyo gnome 3 uye yayo isina kugadzikana kugadzikana
kde, xfce uye mate ndiwo madhesiki andakaedza uye akatsiga mukuedzwa kwedhiian
Ndiri kushandisa Debian Kwayedza izvozvi, uye XFCE yakagadzikana mukuyedza pane kugadzikana.
"... tichitarisa pazvinhu zve server panguva ino)."
Pakupedzisira, ndinofunga kuti Debian anozopedzisira ave se-server-chete distro… ndinoona, pakudemba kwangu, kuti timu yeDebian yekuvandudza nguva zhinji inogara ichisiya mushandisi wedesktop. xD
Huye, hunhu hwaDebian hwakajairika mushanduro dzese (Ndakazviona nekukurumidza apo Debian Lenny Gadziriso 6 yakabuda), uye zvakafanana zvinofanirwa kuitika mune inotevera Debian shanduro.
Ndatenda nenhau 😀
Ava debian sezvo vari kunonoka, vamwe vari kudya keke inodaidza ubuntu, opensuse, fedora. Vanofanira kunge vachikurumidza, nekuti kunyangwe kuyedza iyo distro uye painobuda zviri pamutemo gare gare, zvikanganiso zvakawanda zvinobuda zvakawanda zvekuti vanofanirwa kuve ne7 uye inoenda muna 7.6
Pindura kune debian
Ndiri kusashivirira kwazvo kuburitswa kwekugovera uku !!!! Ini handikwanise kumirira kuisa yakagadzikana vhezheni ne lxde pane yangu yakashata xD netbook, shit shit shit mazuva makumi matatu !!! Kwasara mazuva makumi matatu xD
Kugadzira app yeUbuntu Kubata [QML] - [Chikamu 3]